तपाइँको टोलीलाई भेट्नुहोस् - केन्द्रीय भाषा स्कूल, क्याम्ब्रिज
जोहान वेन्टन: प्रिंसिपल अध्ययनका निदेशक (बीए यूईडी DELTA)
जोन 1984 पछि शिक्षण गरिएको छ र इङ्गल्याण्ड, फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकामा सिकाइएको छ। केन्द्रीय भाषा विद्यालयमा आउनुअघि जोआन लन्डनका शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दै थिए र साथसाथै एक साक्षरता योजना र उत्तर लन्डनमा एक घर शिक्षण योजना व्यवस्थापन गर्दै थिए। त्यो भन्दा अघि, उनी लन्डनका बिजनेस कलेजमा सहायक निदेशक अध्ययनका थिए। उनको जुनून विशेष रूप देखि IELTS र एफईसी कक्षाहरु मा परीक्षा कक्षाहरु को शिक्षण गरिन्छ, तर उनले पीईटी, ईएसओएल र बिजनेस अंग्रेजी पनि पढाए र 13 साल को लागि एक फ्रेंच विभाग पनि चलाए। उनको नि: शुल्क समयमा उनी चलचित्रहरू हेर्दै, कविता लेख्न, पियानो खेल्दै र उनको पति मार्कसँग जंगलको लागि जान्छन्।
जेम्स डेनिस: सहायक निर्देशक अध्ययन र परीक्षा अधिकारी (बीएससी डेल्टा)
जेम्सले विश्वविद्यालयमा फूड साइंसको अध्ययन गरे र चकलेट निर्माताको क्याबरीको लागि काम गरिसक्नुभयो। तथापि, रूसी र फ्रान्सेलीले पनि अध्ययन गरे, याकूबले एहसास गरे कि उनी चकलेटमा भाषाहरू मन पराउँथे (साँच्चै याकूब ?!) र अंग्रेजी शिक्षक हुनको अध्ययन गरे। तब जेम्सले रूस र चेक गणराज्यको साथ साथै यूकेका गर्मीमा स्कूलहरूमा अंग्रेजी पढाई गरेको छ। उहाँको खाली समयमा उहाँ साइक्लिङ मनपर्छ। जेम्स मूलतः बिडफोर्ड, डेभन हो र प्ल्मोउथ एर्गिगेलको एक भावुक समर्थक हो, उनको मनपर्ने फुटबल टोली। जेम्स भन्छिन्, "मलाई केन्द्रीय भाषा विद्यालयमा पढ्न मन लाग्छ किनभने यसले साँच्चै आफ्ना विद्यार्थीहरूको हेरविचार गर्दछ र उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हो। यो पनि एक अनुकूल मित्र दल हो।"
हेडि मोट: शिक्षक (एमए सेल्टा)
हेइडी 2014 को गर्मी मा स्कूल संग जुडा भयो। त्यसअघि उनले साक्षरता र विकासको अध्ययन गरे र विभिन्न देशहरूमा साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी ग्रामीण इलाकामा शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिन मद्दत गरे। "म शिक्षणको रचनात्मकतालाई प्रेम गर्दछु," हेइदी भन्छन्। "मनोरञ्जन र प्रभावकारी बनाउन सधैं नयाँ तरिकाहरू छन् र यो हाम्रो विद्यार्थीहरू आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ कि उनीहरूको इनामदायी छ।" हेडी एक उत्सुक शौकिया कलाकार हुनुहुन्छ, नृत्य मन पराउँछन् र विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लंचमा खाने चिसो लगाइदिन्छ।
बेथानी ट्रान्टर: शिक्षक (MAHons CELTA)
बेथानी मूलतः अक्सफोर्डशायरबाट आउछ (क्याम्ब्रिजमा विवादास्पद छ, तर यसको धेरै अधिक विरूद्ध छैन!)। उनले स्कटल्याण्डको एबरडीन विश्वविद्यालयमा फ्रांसीसी र भाषाविज्ञान अध्ययन गरे, जहाँ उनले पहिलो पटक अंग्रेजी शिक्षणको प्रेम पत्ता लगाए। उनले4साताका लागि स्कटल्याण्ड, इक्वेडोर र स्पेनमा सिकाउनुभयो र केएमएनमक्स पछि क्याम्ब्रिजमा रहेको छ। उनी भन्छिन्, "म साँच्चै केन्द्रीय भाषा विद्यालय क्याम्ब्रिजमा काम गरिरहेको छु, मायालु, पारिवारिक वातावरणमा काम गरिरहेको छु र उनीहरूको दैनिक जीवनमा आनन्द उठाउने चीजहरू लिनको लागि पनि प्रशंसा गर्दछु। र तिनीहरूलाई सामाजिक कार्यक्रमको लागि मजाक गतिविधिहरूमा बदल्नुहोस्। " उनको नि: शुल्क समय मा, बेथानी उनको स्पेनी, साइकल चलाउन, खाना पकाने, कार्ड बनाउन, स्कटिश नृत्य र जंगल मा हिड्न को लागी अभ्यास गर्दछ।
सायन सेरानो: प्रशासन र लेखा प्रबंधक (बीए)
सायन 2003 पछि स्कूलमा भएको छ र त्यसैले विद्यालय र यसको इतिहास बारे धेरै जान्दछ। उनले यहाँ आउनुअघि क्याम्ब्रिजमा3अन्य भाषा स्कूलहरूमा पनि काम गरे। सायन भाषाहरू पढ्दा आफैलाई सियानले स्पेनी र फ्रान्सेली बोल्छ र अन्य देशका मानिसहरू भेट्न पाउँदछ। जोआन र जेरीको साथमा, उनीहरूले अध्ययन गर्न यहाँ आउनुभन्दा विद्यार्थीहरूको धेरै फरक प्रश्नहरूको साथ सहयोग गर्दछ। तिनी भन्छिन्, "मैले यसलाई धेरै इनाम पाइरहेको छु कि अन्तमा विद्यार्थीहरूसँग धेरै इमेलहरू आदानप्रदान गरे पछि भेट्न।" जब त्यो काममा छैन, सियान परिवारको खोजीमा धेरै व्यस्त छ।
Gerry Beves: आवास र मार्केटिंग (BAHons PGDip CELTA)
Gerry धेरै प्रतिभा को एक व्यक्ति हो। उनले 2014-2015 मा CLS मा पढे र जिप्सी र यात्रीहरूलाई साक्षरताको साथसाथै एक बढ़ई र चर्चको पादरीको रूपमा काम गरिसकेको छ। त्यो2बच्चाहरु संग विवाहित छ। उहाँ स्कूलको ईसाई मानहरूबारे भावुक हुनुहुन्छ र उहाँका परिवार, विषयवस्तु पार्कहरू, गिटार खेल्दै गिटार खेल्दै गाइरहेका गिटार, वायलिन र banjoलाई सहयोग पुर्याउन, कसरी आफ्नो पत्नीलाई खाना खाने (विशेष गरी जब उनी तिर्दैछन्), किताबहरु लेख्न, र आलस्य हुदैछ!
शिक्षकहरूलाई आपूर्ति गर्नुहोस्
विद्यालयले समय-समयको आपूर्ति आपूर्ति शिक्षकहरू संलग्न गर्दछ, विशेष गरी वर्षको व्यस्त समयमा। यहाँ हाम्रो नियमित टोलीका सदस्यहरू छन्:
गेल फेथस्टनोन MAHons (फ्रान्सेली) र एमए TESOL
गेल अध्ययन र सिमोन, एक ब्रिटिश कूटनीतिक को विवाह देखि पहिले फ्रांसीसी र जर्मन पढाए। सँगै उनीसँग3बच्चाहरू थिए र चीन, बेल्जियम, स्विट्जरल्याण्ड र मलेसियामा बस्छन्। गेल भन्छिन् कि विदेशमा जीवनको लागि सबैभन्दा उपयोगी योग्यता मध्ये एक एक क्षणको नोटमा कराओके गाई गर्न इच्छुक थियो! सिमोनको प्रारम्भिक मृत्युपछि गेलले लन्डनमा एक दानवमा काम गरेपछि अंग्रेजीलाई शिक्षणमा अन्य भाषाका भाषिकहरुलाई एक मास्टर्स पूरा गर्यो। उनी केन्द्रीयको न्यानो, पारिवारिक वातावरण र सबै संसारका विद्यार्थीहरू भेट्न मौका पाउँछिन्। गायन, स्विमिंग र नाटक स्केच लेखन उनको केही मनपर्दो समयमै छन्।
Lena Payne एमएस र बीए भाषाई एमए सेल्टा मा।
लीनाको जन्म युक्रेनको किभमा भएको थियो। उनीसँग भाषा विज्ञानमा मास्टर डिग्री छ र उहाँसँग सेल्टा योग्यता छ र १ 1999 XNUMX in मा उनले आफ्नो शिक्षण क्यारियर शुरू गर्नुभयो। लेना भन्छिन्, "म वास्तवमै विभिन्न उमेर र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा रमाउँछु। उनीहरूको प्रगति देख्दा र अ English्ग्रेजीमा बढी विश्वस्त हुन सिक्छु। मेरो लागि धेरै सन्तोषजनक छ। विद्यार्थीहरूले पाठको क्रममा कक्षाकोठामा भाग लिनको लागि जीवनको मद्दतको अनुभव ल्याउँदछन्, ताकि शिक्षकको रूपमा तपाईंले कहिल्यै सिक्न छोड्नुहुन्न! केन्द्रीय भाषा स्कूलमा पढाइको थप बोनस यो हो कि यसले धेरै मित्रैलो, आराम र स्वागत वातावरण "। उनको खाली समयमा लीना थिएटर जान मनलाउँछिन्, नृत्य साल्सा गर्छिन्, पहाडहरूमा चढ्न चाहान्थे (धेरै उच्च छैन!) र उनको परिवार र उनीहरूको कुकुर कुँडो संग हिंड्न जान्छन्।